> Resource> DVD> Olee Ọkụ Photos ka DVD na ikwu n'ụzọ na Music
Foto ndị dị oké ọnụ ahịa na-echeta bụghị naanị n'ihi na ị ma nke na-ndị òtù ezinụlọ gị. Dị ka oge na-aga, foto ndị nwere ike ịjụ oyi ma na-enwe ike iji weghachite. Iji zere nke a, ọkụ foto DVD ga-abụ oké echiche iji chebe ezinụlọ na-echeta mgbe ebighị ebi.
Isiokwu a ga-egosi gị otú ọkụ foto DVD ngosi mmịfe na mgbanwe, utu aha na music ọsọ ọsọ na mfe site na iji Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe. Ọ na-enye ụfọdụ Atụmatụ na otú isure foto DVD.
Part 1: Olee Ọkụ Photos ka DVD na Transition, utu aha na Music
Part 2: More Photo ka DVD Atụmatụ
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe Pụrụ inyere gị aka ngwa ngwa ike na ọkụ foto DVD. Download free ikpe version a foto DVD onye mbụ.
Nzọụkwụ 1: Tinye Photo ma ọ bụ Video Files
Na Hazie taabụ, nanị pịa "Tinye Files" button imeghe Chọgharịa window, chọta gị faịlụ na mbubata ha n'ime usoro ihe omume, ị nwere ike ịdọrọ na dobe foto ma ọ bụ vidiyo gaa na hazie ha na storyboard. Pịa Ịmụbawanye button iji nweta a ibu nkiri.
Nzọụkwụ 2: Hazie Photo ngosi mmịfe ikwu n'ụzọ
N'ikwu ya n'ozuzu, mgbanwe mmetụta ga-akpaghị aka ịtinye n'etiti abụọ ọ bụla foto / videos mgbe ị mbubata photos. Ma i nwere ike hazie ha site na ịpị hazie taabụ, mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe a mgbanwe site na ndepụta na thumbnail n'etiti abụọ slides.
Ị nwekwara ike ịgbakwunye n'okirikiri ebe a: pịa Music button ma họrọ a music faịlụ site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: Họrọ DVD NchNhr
Ugbu a ịgbanwee gaa na Mepụta taabụ ka onye edemede a DVD menu si template na ọkụ na-DVD diski ngwa ngwa:
On n'aka nri n'akụkụ nke ihuenyo, abụọ click on chọrọ menu template itinye a DVD menu template.
Pịa Dezie button n'okpuru preview windows hazie gị DVD menu ma ọ bụ nri pịa menu n'ihi na ihe nhọrọ.
I nwekwara ike ime ka a ọkachamara DVD menu iji ike DVD menu ndebiri.
BTW, ọ bụrụ na ị na-achọghị a DVD menu, dị nnọọ ego na "gbanyụọ DVD NchNhr" nhọrọ.
Nzọụkwụ 4: Ọkụ Photos ka DVD Disc
Ugbu a pịa Preview button n'okpuru preview window iji jide n'aka na foto DVD ngosi mmịfe bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ. Laghachi hazie taabụ ịgbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Mgbe ahụ, pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ gị DVD ngosi mmịfe ka DVD.
I nwekwara ike mmepụta foto ngosi mmịfe na-ekiri na Youtube, Mobile Phone, iPhone, PSP, wdg site nhọrọ na-ekpe. N'okpuru ebe a bụ ntuziaka ka ọkụ DVD maka nche na TV:
Fanye a ide DVD diski, ma na-eme ndị na-esonụ.
Pịa "Ọkụ ka DVD". Mgbe ezipụta ọnụ ọgụgụ nke DVD mbipụta. Ị nwekwara ike ịhọrọ n'ịwa ISO Image faịlụ ma ọ bụ DVD nchekwa.
Jide n'aka na PAL ma ọ bụ NTSC TV Standard ntọala ziri ezi. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke ọkọlọtọ na-eji na obodo gị, pịa "Help" button. Na-ezighị ezi TV ọkọlọtọ ga-eme ka playback incompatibility nsogbu.
Wee pịa "Malite" ka ọkụ DVD ngosi mmịfe. Ọ bụrụ na ị na-enyocha Mepụta DVD nchekwa na / ma ọ bụ Mepụta DVD Image File nhọrọ, kwekọrọ ekwekọ faịlụ ga-kere ka kpọmkwem nchekwa.
Ugbu a-na na na zuru ike, mgbe ọkụ zuru ezu, fanye kere DVD diski n'ime gị DVD ọkpụkpọ na-ekiri foto DVD ngosi mmịfe on TV.
Mụta ihe: User Guide nke DVD Slideshow Builder Deluxe
Ọzọ banyere NTSC / PAL TV Standard
Naa, e nwere atọ video formats gburugburu ụwa. Ma onye ọ bụla bụ na-emegide ndị ọzọ. Ka ihe atụ, NTSC na-eji na North America, Canada na Japan; mgbe ọtụtụ ndị ọzọ na mpaghara Pál / SECAM. Iji tinye TV Standard na DVD Slideshow Builder Deluxe, na-aga "Mepụta" Option taabụ ma chọta TV Standard nhọrọ na họrọ NTSC ma ọ bụ PAL. Ọ bụrụ na ị bụghị n'aka na nke onye na-ahọrọ, biko pịa "Help" button, họrọ mba gị, wee pịa "OK", usoro ihe omume ga-ahọrọ nri TV ọkọlọtọ maka gị.
Ọkụ Photos ka DVD / CD dị ka Data Disc
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ọkụ foto na DVD maka nkwado ndabere na mpaghara n'ihu ojiji, gị na mkpa a na-ere ọkụ foto na DVD software dị ka ImgBurn (Free) ma ọ bụ Nero (azụmahịa). Ndị a software-enyere gị aka ọkụ niile dijitalụ media faịlụ ka DVD, N'ezie ị nwere ike ire foto DVD maka nkwado ndabere na mpaghara nzube. Ịhụ na ụfọdụ foto DVD onye-enye gị ohere ọkụ ngosi mmịfe nakwa dị ka ihe mbụ photos. Otú a, ị na-atụgharị foto DVD ngosi mmịfe na mgbanwe, na n'otu oge, ndabere foto DVD maka ndị ọzọ.
Ike iṅomi Photos ka DVD - digitize Photos
Ọ bụrụ na ị na-eji omenala igwefoto na nwetara ibu nke foto na album, ị nwere ike iṅomi photos na kọmputa mere na tọghata foto na dijitalụ usoro. N'ikpeazụ, ị nwere ike nweta ihe ndị a dijitalụ photos, dị ka ndabere foto DVD, na-eziga ndị ọzọ dị ka DVD onyinye, mee ka a foto DVD show na na na TV, wdg All ndị a nwere ike ike mere na ọkacha mmasị gị foto DVD onye software. Ugbu a hụ otú ịgbanwe gị biri ebi foto dijitalụ mbụ:
Họrọ ezi foto nyocha Kwadebe foto gị ka iṅomi Malite foto scanning Gbanwee scanned photos
Ịgụ isiokwu e biri ebi photos na kọmputa abụghị ihe dị mfe ọrụ. Ọ chọrọ ndidi na ụfọdụ Atụmatụ na usoro. Dị ka ị maara, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enye foto scanning ọrụ. N'ihi na Nzọụkwụ 4, ị nwekwara ike ịgbanwe dijitalụ foto na gị họrọ foto DVD onye. Agbanyeghị, ị chọrọ iji nweta gị dijitalụ photos njikere n'ihu gị ọkụ foto DVD na ikwu n'ụzọ na music.